Root Asus Zenfone5V2.21.40.44 ~ မိုးညိုသား
3:06 AM Android Root No comments
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်လည်း ပို့တွေမတင်တာကြာပါပြီ..... ဒီဖုန်းလေးကတော့တော်တော် တိုင်ပတ်ခဲ့လို့ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း တိုင်မပတ်ပဲ အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ သိပြီးသားသူတွေဆိုရင်ကျော်လိုက်ပါ.. မသိသေးသောသူများကတော့ ဆက်ဖတ်ပေါ့နော. ခ်ခ်
အရင်ဗားရှင်းတွေတုန်းကတော့ bat ဖိုင်တစ်ခုကို run လိုက်ရုံနဲ့ အားလုံးကို သူ့အလိုအလျှောက် လုပ်ဆောင် သွားတာပါ.. အခု ဒီဗားရှင်းမှာတော့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး. ဒါကြောင့်ရှာရင်းဖွေရင်း ဒါလေးတွေ့လို့ အဆင်ပြေတာနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပြီးရင် ဖုန်းကို USB debugging On ထားပါ. ပြီးသွားရင် ဖုန်းကို Droidboot ဝင်ရပါ့မယ် တနည်းအားဖြင့် Fastboot mode ဝင်ရမှာပါ.. Fastboot mode ဝင်နည်းကတော့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ ပြီးရင် Power ခလုတ်နဲ့ Volume up ကိုတွဲဖိထားပါ ခဏကြာရင် Droidboot တက်လာပါလိမ့်မယ်.. အောက်ပါပုံအတိုင်းပါ..
Droidboot တက်ပြီဆိုရင် ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်လိုက်ပါ .. စောစောက ADB ဖိုင်ဖြေထားတဲ့ Folder ကို ဖွင့်ပါ အထဲမှ Open ကို နှိပ်ပြီးတော့ Run လိုက်ပါ CMD Windows တက်လာပါလိမ့်မယ်.. CDM command တစ်ကြောင်းရိုက်ထည့်လိုက်ပါ.. fastboot flash fastboot fastboot.img ပြီးရင် Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါ.. boot.img Flash လုပ်နေပါလိမ့်မယ်